कहिलेसम्म खेल्छन् रोनाल्डो ? दिए यस्तो प्रतिकृया - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
कहिलेसम्म खेल्छन् रोनाल्डो ? दिए यस्तो प्रतिकृया
विश्वका महानतम फूटबलरमध्येका एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो आउँदो फेब्रुअरीमा ३६ वर्षका हुनेछन् ।
युभेन्टस क्लब र पोर्चुगलका सुपरस्टारले हालै एक अन्तर्वार्तामा भने, ‘म अहिले पनि राम्रो अनुभव गरिरहेको छु । फुर्तिलो छु र जीवनको राम्रो चरण चलिरहेको छ ।’
उनले थपे, ‘म अझै थुप्रै वर्ष खेल्ने आशा छ । तर भविष्यमा के हुन्छ कसले भन्न सक्छ र ?’
युभेन्टससँग रोनाल्डोको सम्झौता सन् २०२२ मा सकिँदैछ । त्यसपछि पनि उनले संन्यास लिने योजना छैन ।
रोनाल्डोले भने, ‘तपाईंलाई खेल्ने प्रेरणा प्राप्त भइरहन्छ भने संन्यास छिट्टै लिनुपर्छ भन्ने छैन । म युवाहरूलाई पनि क्षणको आनन्द उठाउनका लागि सल्लाह दिइरहेको हुन्छु किनकि भोलि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन ।’
विश्वकप जित्ने रोनाल्डोको सपना
‘मलाई दर्शकविना स्टेडियममा खेल्न मन पर्दैन । यो सर्कस जस्तै हुन्छ तर तपाईं जोकर देख्नुहुन्न,’ रोनाल्डोले भने, ‘यस महामारीले मानिसहरूलाई बौलाहा बनाएको छ । मलाई आशा छ कि चाँडै उनीहरूले स्टेडियमको ढोका खोल्न सक्नेछन् । हामीले यससँगै बाँच्नु पर्छ, हामीले सामान्य जीवनको लागि प्रयास गर्नुपर्दछ तर नि:सन्देह हामीले नियमहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ । तर फ्यानहरु बिना खेल्नु, मलाई यो वास्तवमै मनपर्दैन ।’